Iyo nyowani vhezheni ye TrueNAS CORE 13 yakatoburitswa | Linux Addicts
Iyo nyowani vhezheni ye TrueNAS CORE 13 yakaburitswa
Darkcrizt | 21/05/2022 00:30 | Free Software
Mushure megore nehafu yekuvandudza, iXsystems yakaratidza kuburitswa kwe TrueNAS CORE 13, kugovera kwekukurumidza kutumirwa kweNetwork-Attached Storage (NAS).
Iyi vhezheni itsva ye TrueNAS 13.0 ine ese akafanana masevhisi uye yepakati seTrueNAS 12.0 nekuvandudzwa mukuchengetedzeka, kuwanikwa, kunaka, kuita uye zvinosanganisira zvinopfuura 270 gadziriso nekuvandudzwa. Nzvimbo dzinozivikanwa dzekuvandudza muTrueNAS 13.0 dzinosanganisira OpenZFS 2.1, FreeBSD 13.0, Samba 4.15, nezvimwe.
TrueNAS CORE inomira pachena nekuti yakavakirwa paFreeBSD 13 codebase, ine yakavakirwa-mukati ZFS rutsigiro uye webhu-based manejimendi yakavakirwa paiyo Django Python chimiro.
FTP, NFS, Samba, AFP, rsync uye iSCSI zvinotsigirwa kuronga kupinda kwekuchengetedza, software RAID (0,1,5) inogona kushandiswa kuwedzera kuvimbika kwekuchengetera, LDAP/Active Directory tsigiro inoitwa kuitira mvumo yemutengi.
1 Makiyi ekuvandudza muTrueNAS CORE 13.0
2 Dhawunirodha uye tora TrueNAS CORE 13
Makiyi ekuvandudza muTrueNAS CORE 13.0
Mune iyi vhezheni nyowani yekugovera iyo inounzwa, inosimbiswa kuti iyo ZFS faira system kuita yakakwidziridzwa kuOpenZFS 2.1 uye zviri mukati mezvakatipoteredza base yakawiriraniswa neFreeBSD 13.1. Zvinofanira kucherechedzwa kuti shanduko kuenda kubazi reFreeBSD 13 uye nekuwedzera optimizations zvakaita kuti zvikwanise kuwana kuwedzera kwekuita kunosvika makumi maviri muzana paNAS hombe.
Chimwe chinhu chitsva cheiyi vhezheni itsva ndechekuti yakaderedza zvakanyanya ZFS dziva rekupinza nguva nekuda kwekuenderana kwemaitiro. Reboot uye failover nguva pane yakakura masisitimu yakaderedzwa neinopfuura 80%.
Kune NFS inotaurwa kuti iyo rutsigiro rwe nconnect mode, iyo inokutendera kuti uparadzire mutoro kune akawanda akasimbiswa ekubatanidza kune server. Pane yakakwirira-kumhanya network, tambo parallelization inogona kuvandudza mashandiro kusvika ku4 nguva.
Kune rumwe rutivi, zvakare inosimbisa iyo kushandiswa kweshanduro 4.15 yeSamba iyo ine yakakosha kuchengetedzwa kwekusimudzira uye chaiyo faira system inosimudzira iyo inovimbisa SMB rutsigiro rwakachengeteka uye rwakasimba.
ari TrueNAS 12.0 uye TrueNAS 13.0 vashandisi vanewo sarudzo yekutamira kuTrueNAS SCALE, iyo inotsigirawo Samba 4.15, NFS nconnect, uye OpenZFS 2.1 (pamwe nezvimwe zvinhu), asi inobva paDebian Bullseye uye kwete FreeBSD.
Parizvino, kugovera kuri muvhezheni yayo TrueNAS SCALE 22.02.1, iyo inosiyana neTrueNAS CORE nekushandisa Linux kernel uye hwaro hweDebian package. FreeBSD uye Linux yakavakirwa mhinduro dziripo uye dzinozadzisa mumwe nemumwe kuburikidza neyakajairwa chishandiso codebase uye generic web interface.
Kupa imwe edition yakavakirwa paLinux kernel imhaka yechishuwo chekushandisa mamwe mazano asingawanikwe uchishandisa FreeBSD. Semuenzaniso, TrueNAS SCALE inotsigira Kubernetes application, KVM hypervisor, REST APIs, uye Glusterfs.
Iyo itsva vhezheni yeTrueNAS SCALE yatamira kuOpenZFS 2.1 uye Samba 4.15, yakawedzera rutsigiro rweNFS nconnect, yaisanganisira Netdata yekutarisisa application, yakawedzera rutsigiro rwekuzvivharira disks, yakagadziridzwa manejimendi eboka, yakagadziridzwa tsigiro yezvisingapindiki magetsi, yakawedzera Gluster uye cluster. Purogiramu inonzi SMB
Iyo mushandisi interface inopa kugona kuona iyo virtual muchina matanda.
Tsigiro yekuisa mumapoka zvikamu zvine maakaundi, zvichengetedzo, zvigadziriso zvenetiweki, maapplication, marongero, mishumo, uye zvimwe zvakawanda zvikamu zvakawedzerwa kuUI.
Yakagadziridzwa iconik uye Asigra plugins.
iSCSI Target performance yakagadziridzwa uye kushanda kweI/O kwakagadziridzwa zvakare.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni nyowani, unogona kutarisa iyo ruzivo mu inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha uye tora TrueNAS CORE 13
Kune avo vanofarira kukwanisa kuwana mufananidzo weiyi vhezheni itsva ye TrueNAS CORE 13, vanogona kuzviita zvakananga kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti.
Iyo system iso mufananidzo saizi i900 MB (x86_64) uye unogona kuwana mufananidzo kubva iyi link
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni ye TrueNAS CORE 13 yakaburitswa
Vakawana kusagadzikana muPython inobvumira mirairo kuti iitwe kubva kune sandboxed zvinyorwa
Nativefier + Electron = Webhu → app